သူစိမ်းကို အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်မှုမှ တရားခံရဲ့ မိသားစုဟာ ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်၊ ရှင်လျက်နှင့်ငရဲကျသွားသလိုပါပဲ - JAPO Japanese News
သော 22 Oct 2021, 10:24 မနက်
အိဘရခိ စီရင်စုမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုသတ်ပြီး၊ ကလေးနှစ်‌ယောက်ကို ဒါဏ်ရာရစေခဲ့တဲ့ အပြစ်ကြောင့် သံသယတရားခံ အိုခနိဝ ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒေါသထွက်ဖွယ် အငြင်းပွားမှု၊ ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ အငြှိုးစတာတွေဆိုရင်တော့ နားလည်ပေးလို့ရပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် သူကကျတော့ သူ့ဟာသူနေနေတဲ့သူကို သတ်ပစ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့၊ ဆက်နွယ်မှုလည်းမရှိတဲ့ လူကို ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာ ပြစ်မှုတွေထဲမှာ ခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်း လုံးဝမရှိတဲ့ အပြစ်တွေထဲမှာပါပါတယ်။
ဖမ်းမိတာကတော့ မလွဲမသွေပါပဲ၊ ပြီးတော့ သေဒဏ်ချခံရတာလည်း ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ပြည်သူပြည်သားတွေက တွေးနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအမှုအခင်းကို ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ တရားခံရဲ့ မိသားစုကရော ဘယ်လိုဘဝလမ်းမျိုးကို လျှောက်လှမ်းကြရမှာပါလိမ့်?
ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ကာယကံရှင်မဟုတ်လို့ တရားဥပဒေအရတော့ ဘာတာဝန်မှမရှိပေမယ့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ဒီလိုဥပဒေမျက်လုံးနဲ့ သဘောကောင်းကောင်း ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အစ်ကိုက ဘယ်သူပဲဖြစ်နေနေရတယ်၊ လူဖြစ်နေရင်ကိုပဲသတ်ချင်ခဲ့ပုံပါပဲ
ဘယ်သူပဲဖြစ်နေနေရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မမိသားစုကိုပဲ သတ်စေချင်ခဲ့တယ်…
ဒီစကားကို ပြောခဲ့တာကတော့ ဒီတစ်ခေါက် သံသယတရားခံ အိုခနိဝ လိုမျိုး အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွတ်ခဲ့တဲ့ တရားခံရဲ့ ညီမပါပဲ။ တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ရပြီးတော့ မိဘတွေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အသိယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပြီး၊ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ကလေးတွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်နေခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အစ်ကိုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်မှုသတင်းဟာ သူတို့ဆီရောက်လာပါတော့တယ်။
သတင်းမီဒီယာတွေဟာ သူမနေနေတဲ့ အိမ်အထိလိုက်လာကြပြီး၊ ဘာတွေမှတ်ချက်ပေးချင်လဲ မေးကြပါတော့တယ်။
သူတို့လင်မယားဟာ အရမ်းစိတ်ဆိုးပြီး အိမ်မှာတောင်မနေနိုင်ကြတော့ဘဲ၊ မိဘအိမ်ကို ညသန်းခေါင်ကြီး ပြန်ရပါတော့တယ်။
သတင်းမီဒီယာလို့ထင်ရတဲ့ ကားတွေဟာ အိမ်နားပတ်ပတ်လည်မှာ ရပ်နေကြတာကြောင့်၊ တိတ်တိတ်လေး အမှောင်ကြီးထဲ ထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါ။
နောက်နေ့မနက် သတင်းမီဒီယာကလူတွေဟာ အခေါက်ခေါက်အခါခါ တံခါးဘဲလ်ကို တီးကြပါတော့တယ်။
သူတို့လင်မယားဟာလည်း အစာတောင်မစားနိုင်လောက်အောင် ပင်ပန်းနေကြပါပြီ။
သူမဟာ တစ်ယောက်တည်း ဆွေမျိုးတွေဆီကို တောင်းပန်ပြီး ကူညီပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမယ့်လည်း၊ အပြစ်သာတင်ခံရပြီး ကူညီပေးသူမရှိခဲ့ပါဘူး။
နေ့စဥ်နေ့တိုင်း နှောက်ယှက်စာတွေ ခြိမ်းခြောက်စာတွေအများအပြား ရောက်လာနေပါတော့တယ်။
ယောက်ျားလုပ်သူကပဲ နေထိုင်စားသောက်စားရိတ်တွေကို ရှာရပြီး၊ သူမနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ခါမှမနေဖူးတဲ့ အရပ်ဒေသမှာ တိတ်တိတ်လေး ပုန်းနေရပါတော့တယ်။
လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာကို အရမ်းကြောက်သွားပြီး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆိုတာလည်း တစ်ယောက်မှမရှိတော့ပါဘူး။
ဆွေမျိုးတွေဟာလည်း သူမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကို တွေ့ပြီးစကားပြောပေးတာလောက်တောင် မလုပ်ပေးကြတော့ပါဘူး။
သူမဟာ လေယာဉ်မယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်၊ ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝမျိုးမှာ ဘယ်အိမ်မက်မှလည်း ဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။
အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူဟာ နဂိုကတည်းကတော့ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေခဲ့သူ ဟုတ်ပုံမရပေမယ့်၊ အလုပ်မှာရော မိသားစုနဲ့ရော အဆင်မပြေတာကြောင့် “သေချင်တယ်” လို့တစ်ချိန်လုံး ပြောနေခဲ့ပုံပါပဲ။
အဲ့ဒီလိုစကားတွေ ပြောနေတုန်းက နားထောင်ပေးလိုက်ရင် ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်မလာဘူးလို့ ခံစားနေခဲ့ရတဲ့ သူမဟာ အခုထိလည်း ဒီအတွေးနဲ့ပဲ နေနေရပါတော့တယ်။
အငြိုးတွေဘာတွေ မရှိပေမယ့်၊ ဒီလိုမျိုး အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်တဲ့ တရားခံတော်တော်များများဟာ တကယ်တော့ အလယ်အလတ်တန်း မိသားစုဖြစ်ပြီး၊ ကလေးအများကြီးရှိတဲ့ မိသားစုတွေကများတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
မိဘတွေက ဂုဏ်ယူနိုင်အောင် ကလေးတွေက စာသင်ရတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာ ကလေးတွေအပေါ်ကို ဖိအားတွေများလာပြီး လူ့အရည်အသွေး စွမ်းဆောင်ရည်တွေမှာ ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ကျောင်းတက်ပြီးရင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေလို့ ထွက်ချင်တာတောင် ထွက်မရဘူး။
ဒီလိုတွေ အမောင်းခံရတဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့၊ စိတ်ပျက်အားငယ်တာတွေ ဖြစ်လာပြီး အမှုအခင်းတွေ ကျူးလွန်မိတဲ့ ပုံစံပါပဲ။
ဒါကြောင့်ဆိုပြီးတော့လည်း တရားခံကို ခွင့်လွှတ်လိုက်လို့ မရပြန်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မိသားစုက ဒီလောက်ကြီးအထိ နေလို့ထိုင်လို့မရအောင် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့လည်း မဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေပါပဲ။ မောင်နှမသားချင်းတွေရဲ့ ကလေးတွေအထိပါ ဒီလိုခံစားရတာကတော့ ကောင်းတဲ့အဖြေမဟုတ်တာ ပြောစရာကိုမလိုပါဘူး။
ခံရသူရဲ့ မိသားစုခံစားချက်ကို တွေးကြည့်ရင်တော့၊ တရားခံမိသားစုကိုလည်း အကုန်ပြန်ခံကြ၊ ကံဆိုးကြဆိုပြီး တွေးမိတာမျိုး ရှိပေမယ့်လည်း၊ နည်းနည်းတော့ လွန်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်နေပြောနေကြတာတွေကလည်း ခံရသူဘက်က မိသားစုတွေမဟုတ်ကြဘဲ၊ သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ အပြင်မသက်ဆိုင်သူတွေ များနေလို့ပါပဲ။
ဂျပန်ရဲတွေဟာ နောက်ပြောင်နှောက်ယှက်ခံနေရတာလား? ဒီလိုတွေအရေးပေါ်တာကြောင့် အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်လာတယ်ဆိုပဲ…
ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင် မဖတ်တတ်တဲ့ ဂျပန်စာကို AIသုံးပြီး ဖတ်နိုင်ခဲ့သော ထိုင်းအမျိုးသမီး
Death Note အတိုင်းပဲလား? ဂျပန်မှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ကျိန်စာတိုက်သတ်ခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ Homeless အရက်ကျေးကျွန်ဘဝများ !!!!
ခရစ်တော်နှင့် ဗုဒ္ဓတို့၏သင်္ချိုင်းရှိရာ Aomori စီရင်စု! ၎င်းဟာကမ္ဘာရဲ့သန့်ရှင်းရာမြေလား?
ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင် မဖတ်နိုင်တဲ့ ဂျပန်စာ
လေလည်ခြင်းကြောင့် လေလည်သူရော လေလည်ခံရသူပါ အသတ်ခံရခြင်း